Linus Torvalds na-ekwu okwu nzuzo, CoC na Linux na desktọọpụ | Site na Linux
Linus Torvalds na-ekwu okwu nzuzo, CoC na Linux na desktọọpụ
Linus Torvalds laghachiri iduzi ọrụ Linux ọzọ na n'oge na-adịbeghị anya nyere Swapnil Bhartiya mkparịta ụka nkịtị, onye na-akwado ihe omimi nke Open Source na onye nchịkọta akụkọ ugboro ugboro na isi ụlọ ọrụ Linux Foundation.
N'ajụjụ ọnụ a ebe kwuru banyere ọhụụ ya na ụfọdụ okwu metụtara ụwa na Linux Open Source technology, yana ụzọ ọpụpụ ya nwa oge site na ọrụ ahụ na ụkpụrụ omume ọhụrụ.
Linus kwuru na Linux na ngalaba kọmputa desktọọpụ enwere ike ị nweta site na Chromebooks.
1 Mmeri nke Linux na desktọọpụ
1.1 Dị mmepe na-emepe emepe
1.2 Banyere nzuzo
1.3 Banyere ụdị onye ị bụ na CoC (Usoro Omume)
Mmeri nke Linux na desktọọpụ
Nkwupụta na Chromebooks na-egosi ole "mmeri nke tebụl ahụ" ọ dịka ọ bụ otu n'ime obere "okwute n'ime akpụkpọ ụkwụ" nke Linus Torvalds .
Bhartiya na-ekwu na "n'agbanyeghị na Linux dị ebe niile," Linus Torvalds na-ahụ desktọọpụ dị mkpa.
Linus chere na Chrome OS na gam akporo bụ ụzọ aga.Ọ na-ekwu nchekwube, agbanyeghị: "Enwere m nchekwube maka desktọọpụ kemgbe afọ 25," ọ na-egwuri egwu, mana onye ma ihe na-echere anyị n'ọdịnihu. Ọtụtụ agbanweela na nke a na afọ 8 ruo 10 gara aga.
Dị mmepe na-emepe emepe
Linus Torvalds na-ekwu banyere ụdị mmeghe emeghe nke ghọrọ ụkpụrụ nke mmepe taa, na-ekwu na ọ ghọtara na e nwere ngwaahịa niche na-achọta ọbụna uru karịa na usoro sọftụwia ochie.
Mana ụlọ ọrụ ndị a (nke na-arụ ọrụ na sọftụwia nwere nke ha) na-eji ọtụtụ ihe ma ọ bụ obere ihe mmeghe iji nye ọrụ ha ma ọ bụ mepụta akụrụngwa ọrụ ha.
Mgbe a jụrụ ya ma ọ na-eche banyere nkà ihe ọmụma dị na Open Source ma ọ bụ sọftụwia efu (sọftụwia efu), Linus kwuru na naanị ihe dị mkpa bụ koodu ngwanrọ na-emeghe, ọkachasị ndị ị na-arụ ọrụ na ya, ọ bụghị ụdị azụmaahịa ma ọ bụ amamihe dị na ya.
Linus Torvalds na-ekwu na ya achọghị ịma banyere nzuzo ya n'ịntanetị, mana kwetara na nke a nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu maka ọtụtụ ndị nwere mmetụta ọsọ ọsọ.
Ọ na-azọrọ na dịka onye ọha na eze, ọ hụghị na ọ bara uru na-echegbu onwe gị banyere ụdị ihe ahụ, ka emechara, ọtụtụ n'ime ya abanyela na ịntanetị n'ihu ọha.
Linus Torvalds ka na-ekwu na nchịkọta data yiri ka ọ nweghị ntụgharị, ka emechara (data) dị mkpa iji wuo ngwaahịa ndị ka mma, nnukwu ajụjụ bụ na ị nwere ike ịhọrọ ịnye ya ma ọ bụ.
Linus Torvalds na-ekwu na ndị mmadụ na United States, n'ozuzu ha, etetebeghị n'ụra nke ahụ.
Banyere ụdị onye ị bụ na CoC (Usoro Omume)
Laịnọs Torvalds na-ekwu banyere omume ha mgbe ha na-aza ozi ịntanetị sitere na obodo mmepe Linux, na-ekwu na taa ọ na-ahọrọ izere ịza ụfọdụ ihe ma lekwasị anya na idozi nsogbu ahụ, ihe dịka: kwuo obere okwu, meekwu ihe.
Mgbe ajụrụ ya maka ọpụpụ ya na ọrụ ahụ maka ntinye ma ọ bụ naanị "arụ ọrụ nke ukwuu", Linus Torvalds ọ na - ekwu na "ike agwụghị gị na Linux" dị ka ọtụtụ ndị chere mgbe ọ dị nso "mere ezumike".
Ọ gbakwụnyere site na ịsị na ọ bụ oge nrụgide, na ọtụtụ nsogbu ọrụaka ga-edozi yana na oge ụfọdụ ọ chọrọ "izu ụka dị ogologo" naanị iji chee maka ihe dị iche, tupu ọ laghachị azụ na agụụ ya.
N'otu oge, Greg Kroah-Hartman, onye nọ n'ọnọdụ Linus N'oge "ezumike" ndị a ma bụrụ otu n'ime aka nri nke Linus Torvalds ruo ọtụtụ afọ na ọrụ Linux, ọ na-esonye na ajụjụ ọnụ ahụ iji tụlee isiokwu ụfọdụ.
Ha abụọ na-ekwu maka nsogbu nke oge ikpeazụ nke ntọhapụ nke ụdị Linux Kernel, na mbipute ya kachasị ọhụrụ, nchọpụta nsogbu, yana ihe karịrị patch 70 dị mkpa na ụdị ihe ahụ, mechara mee ka oge ahụ dị ntakịrị "karịa" karịa ka ọ dị na mbụ.
Mana ọzọkwa kwuru na n'izu mbụ nke remake bụ "na-enweghị nsogbu na mgbe ọ bụla," na-ekwupụta na Linux na-anọgide na-emeghe oghere oru ngo na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'otu oge na ntọhapụ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Linus Torvalds na-ekwu okwu nzuzo, CoC na Linux na desktọọpụ
Ezi mpụta ma na-abịa n'oge, ana m ekele gị nke ukwuu. Ugbu a banyere Linus, omume dị iche na nke Maazị Ikey Doherty, (isi) isi a na-ahụ anya na (ex) ụbụrụ nke Solus Project na n'oge ọ dị ebube ghọrọ otu n'ime 6 Distros kachasị mkpa n'ụwa na site na oge onye ọzọ furu efu maapụ ahụ, mechie netwọkụ mmekọrịta ya niile, hapụrụ ndị ọrụ ya na ndị ọrụ ya na-ele ọkụ ọkụ n'ụzọ enweghị isi ma werekwa okwuntughe ya na akaụntụ akụ ebe ndị mmadụ nyere onyinye. Nke mbụ laghachiri ma tinye ihu ya, akwụkwọ nke abụọ ka "mụta ịkpọ ụbọ ma mechaa ụzọ ọkwọ ụgbọala ya."
Zaghachi Andreale Dicam
Uhie okpu agaghị apụ n'anya mgbe ịzụrụ IBM
IBM zụtara Red Hat maka $ 34 ijeri.